वोदका "फिनल्याण्ड": निर्माता, प्रजाति समीक्षा। एक नक्कली कसरी भेद गर्न?
फिनल्याण्डका बासिन्दाहरू हाम्रो आगंतुकों द्वारा बलियो रक्सी को मात्र होइन प्रेम, तर पनि यसको प्रयोग को संस्कृति हैरानी। उत्तरी प्रकृति, चिसो र ध्रुवीय रात को STARK सौन्दर्य intoxicating कुरा यो देश को बासिन्दाहरूलाई को झुकाव कारण। वोदका, आउटडोर tinctures सबै प्रकारका लामो पहिले छन्। अब, आधुनिक प्रविधि र सख्त गुणवत्ता पर्यवेक्षण उत्पादन फिनल्याण्ड संसारमा distillates को मुख्य निर्यातकहरु बीचमा।
यस लेखमा केवल एक मादक पेय स्कैंडिनेवियाई देशहरुमा मूल संग गर्नुहुन्छ। यो वोदका "फिनल्याण्ड"। यसलाई "प्रिमियम" वर्ग को मूल्य खण्ड बुझाउँछ। यसको ब्रान्ड विश्वव्यापी चिन्न। यो रक्सी को एक बोतल सस्तो छैन छ। यो लेख हेर्नुहोस् - विभिन्न वोदका "फिनल्याण्ड" को क्लासिक बाहेक के कन्टेनर को मात्रा हो कसरी वास्तविक पेय देखि एक नक्कली छुट्याउन गर्न स्वाद, के हो।
कसरी एक उत्पादन सिर्जना गर्न
वर्ष धेरै हजारौं पहिले, पृथ्वी एक वैश्विक हिमीभवन भोगे। के यो वोदका "फिनल्याण्ड" संग गर्न छ? सबैभन्दा तत्काल। शुद्ध पिघल पानी संग एक अद्वितीय वसन्त पछि छोडेर हिमनदी घट्दैछ। यसलाई "फिनल्याण्ड" यो आधारित छ वोदका। निर्माता Finlandia वोदका विश्वव्यापी लिमिटेड दक्षिण मा Koskenkorva को सानो सहरमा बसे, र पानी उत्पादन अद्भुत वसन्त छ जो नजिकैको Rajamäki को, गाउँ देखि लिन्छ।
यस पेय मा दोस्रो र उत्तिकै महत्त्वपूर्ण संघटक, यो सूर्य को सत्तरी दिन भित्र बादल मडारिरहेको पछि लुकेको छ जब नहीं, ध्रुवीय दिन को उत्तरी जलवायु ripens जो छ-पङ्क्ति जौ छ। अन्नको त्यसपछि त रक्सी गर्न प्रसारित छ जो एक विशेष ऊर्जा, डायल। तर अरूको अगाडि वोदका को प्राकृतिक लाभ बाहेक सराहना र प्रविधिहरू गर्न। निर्माता अल्कोहल बहु आसवन, जसद्वारा वोदका विभिन्न अशुद्धताओं देखि purified खुला गर्छ।
एक ब्रान्ड को जन्म
बलियो पेय को पहिलो ब्याच "फिनल्याण्ड" भनिन्छ आठौं हजार आठ सय असी वर्ष मा प्रकाशित भएको थियो। तथापि, सबै चिन्न ब्रान्ड धेरै पछि सिर्जना गरिएको थियो। एक हजार नौ सय नब्बे लेबल बोतल गर्न reindeer warring सजाया अप। अब लोगो परिवर्तन भएको छ। अब ध्रुवीय सूर्य को पृष्ठभूमिमा मृग यस स्त्रिहरु। भइरहेको छ बोतल डिजाइन धेरै पटक परिवर्तन। यस कम्पनीको व्यवस्थापन गर्ने प्याकेजिङ्ग छ जो वोदका "फिनल्याण्ड" परिष्कृत स्वाद को योग्य बनाउन निर्णय गरेको छ। बरफ को एक ब्लक देखि carved भने फोटो, सुन्दर बोतल देखाउँछ।
निर्माता सफा वातावरण पनि हेरविचार गरे। बोतल फेंक यस्तो पाप टाढा। आखिर, मूल डिजाइन सजिलै एक फूलगुच्छा लागि फूलदान यसलाई बारी सक्छ। कन्टेनरको उत्पादन मात्रा पचास milliliters देखि लिटर छन् (पाँच सय र सात सय milliliters मा बोतल छन्)। हालै त्यहाँ छुन साथ क्षेत्रहरु मा वोदका थियो। दुई लिटर यसको मात्रा एक ठूलो कम्पनी मा पिकनिकको लागि अपरिहार्य पैकिंग बनाउँछ। कम्पनी को उत्पादन क्षमता सबै एउटै ठाउँमा अवस्थित छ - Koskenkorva को सानो सहरमा।
वोदका "फिनल्याण्ड" स्ट्यान्ड पेय रूपमा राम्रो छ, र ककटेल लागि एक संघटक (ज्यादातर लामो पेय) को रूपमा। यो एक एपेरिटिफ रूपमा सेवा गर्न सकिन्छ वा आफ्नो विभिन्न हार्दिक मासु व्यञ्जन साथ दिनु गर्न।
सबै वोदका संग, "फिनल्याण्ड" पेय chilled। सुन्दर बोतल धन्यवाद यो छुट्टी तालिका मा शानदार देखिन्छ। यो वोदका उपयुक्त र कसरी महंगा वरदान हो। स्वाद, धेरै नरम छ हुनत गढ - distillates लागि मानक (चालीस डिग्री)। त्यसैले, यो सामान्य पिउन आवश्यक छ। तर, हामी अन्य distillates, कुनै टाउको दुखाइ र कुनै hangover सिंड्रोम को अनुभव गर्न यसको विपरीत, आश्वासन प्रतिक्रियाहरू छन्, बिहान मा खुराक बिना। रूपमा
पी स्थिति सस्तो हुन सक्दैन। पछि वोदका "फिनल्याण्ड" प्राकृतिक र अद्वितीय dvuhsoturovnevuyu शुद्धीकरण र आसवन बित्दै भौतिक उत्पादन। रूसी बजार मा, पेय को आधा-लीटर बोतल आठ सय rubles लायक छ (सोधेर सात सय हजार र असी ग्राम र 1 एल -। 1410 पृ)। तर पनि यस्तो उच्च मूल्य भन्दा राम्रो बिक्री हुन वोदका हस्तक्षेप गर्दैन। हरेक वर्ष, संसारभरि मानिसहरू कुलीन पेय को बक्स आधा एक लाख भन्दा बढी किन्न।
शास्त्रीय "फिनल्याण्ड": विनिर्देशों, समीक्षा
यो कम्पनी 1888 मा जारी जो पहिलो वोदका छ। त्यसपछि भएकोले बोतल को डिजाइन, लेबल, तर गुणस्तर परिवर्तन गर्न। यो सबै राम्रो गरे र मजबूत प्रेम गर्दा रूपमा उन्नाइसौँ शताब्दीमा, जस्तै उच्च रहनेछ। यस पेय गुणस्तर मा नक्कली वोदका "फिनल्याण्ड" अक्सर सामान्य छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा प्रमाणित छ। पछि, हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ कसरी मूल पेय देखि नक्कली छुट्याउन गर्न।
क्लासिक "फिनल्याण्ड" को स्वाद विशेषताहरु के के हुन्? समीक्षा पेय बल्लतल्ल ताजा सुखा टुकडा को टिप्पणीहरू घुम्टो जो धेरै मधुर सुगन्ध छ भन्छन्। वोदका को परिष्कृत स्वाद। यो पाकेको जौ को मूख्य fruity टिप्पणीहरू अन्तर्गत बल्लतल्ल श्रव्य सुनिन्छ। तीव्र रक्सी aftertaste हराइरहेको छ। क्लासिक वोदका "फिनल्याण्ड" मासु thistles, सूप, तातो, घर-शैली, रातो कावीयार, पोलेको मासु (विशेष गरी Kebabs) संग प्यानकेकहरू राम्रोसँग जान्छ। तपाईं एक पेय, "एकल" प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, खाजा राम्रो मशरूम, तरकारी marinated छ मसालेदार र ग्रील्ड।
वोदका "फिनल्याण्ड": प्रजाति
लामो समय को लागि पेय एकल, क्लासिक संस्करण मा उत्पादन भएको थियो। पछिल्लो शताब्दीको नब्बे को दशक मा मात्र, कम्पनी एक बोल्ड प्रयोग मा निर्णय र बेरी स्वाद संग अन्तर्राष्ट्रिय बजार पेय आपूर्ति गर्न थाले। त्यसैले वोदका "फिनल्याण्ड" Cranberry "" (1994) थियो। सफलता सबै आशा नाघ्यो। गंध र उत्तरी जामुन को स्वाद, को पेय को उज्ज्वल गुलाबी रंग नयाँ उत्पादनहरु को बिक्री को मात्रा बढ्यो कि क्लासिक आवरण "फिनल्याण्ड" उपभोक्ताहरु त खुसी थियो।
सफलता को आनंद पछि, कम्पनी कागती (1999) संग स्वादिष्ट एक वोदका जारी गरेको छ। लामो पेय र शट लागि सिर्जना हुनत यो प्रजाति थियो। दुई-हजार वर्ष यसलाई यस्तो वोदका "फिनल्याण्ड" उत्पादनहरु को एक तेजी विस्तार दायरा भएको छ। साधारण, जंगली जामुन, अंगुर दाख, सुन्तले रङ र blackcurrant तपाईं ककटेल को एक विस्तृत विविधता सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। "फल" वोदका, समीक्षा गर्न, र उचित सेक्स जस्तै अनुसार।
वोदका "फिनल्याण्ड": एक नक्कली छुट्याउन कसरी
उच्च मूल्य र अक्सर बोतल को डिजाइन को पेय ठगी एक बारम्बार पीडित बनाउन परिवर्तन। हामी वोदका को स्वाद गुणस्तर जांच छ, यसको स्वाद वर्णन। तर कसरी बोतल मा नक्कली neraskuporennoy भेद गर्न? 2011 देखि मूल प्याकेजिङ्ग बरफ को एक सानो पग्लियो ब्लक देखिन्छ। एक बोतल एक नालीदार संरचना संग स्पष्ट ग्लास को गरे। नक्कली वोदका "फिनल्याण्ड" त्यसैले pretentious हुन असम्भाव्य छ, तर कारण महंगा प्याकेजिङ्ग। अर्को, लेबल ध्यान। यसलाई पारदर्शी फिलिम मा छापिएको छ। यसमा ढाँचाको स्पष्ट, उज्ज्वल रंग हुनुपर्छ। "शुद्ध हिमनदीय वसन्त पानी र उत्कृष्ट छ-पङ्क्ति जौ बनाइएका फिनल्याण्ड को वोदका।" यो लेखिएको उत्पादन को originality एक चिन्ह हो। बोतल को फिर्ता लेबल एक अपारदर्शी फिलिम को गर्नुपर्छ।
क्लासिक वोदका "फिनल्याण्ड" अत्यन्तै पारदर्शी रंग मा। पहिलो नजर मा, यो यदि आवरण धातु को बनेको छ रूपमा देखिन्छ। तपाईंको नड़ यसलाई ट्याप गर्नुहोस्। साँचो "फिनल्याण्ड" चाँदी रंग मा चित्रित टोपी प्लास्टिक बनेको। भित्र औषधि को घाँटी एक गिलास बल र एक सुरक्षा वाल्व राखिएको छ।
एक नक्कली वोदका को "फल" कसरी भेद गर्न
लोकप्रियता Cranberry "फिनल्याण्ड" यो गाँस्न थाले भन्ने तथ्यलाई गर्न नेतृत्व गरेको छ। जालसाजी खरीद आफूलाई सुरक्षित गर्न, तपाईँले, उल्टो बोतल बारी गर्नुपर्छ मिलाउ र प्रकाश मा यो हेर्न। रंग हावा बुलबुले चाँडै ढल्छ हुनेछ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। वोदका रंग बादल हुन्छ भने, यो हानिकारक अशुद्धताओं छ भन्ने हो। यो नक्कली हो। कि त्यहाँ Cranberry र अन्य फल वोदका सेतो (पारदर्शी) रंग छ? हो, अवश्य। र यो रंग - जालसाजी को एक चिन्ह छैन। तथ्यलाई हालै, कम्पनी को अवधारणा परिवर्तन छ। अब यो फल वा जामुन तल रंग मा एक स्पर्श अप बोतल प्रदान गर्दछ। तर मानिसहरूले यति भनेर Cranberry वोदका "फिनल्याण्ड", फोटो विज्ञापन उज्ज्वल गुलाबी हुनुपर्छ, एक पारदर्शी एनालग खरीद को सावधान रहन प्रिन्ट गरियो जो प्रयोग गरिन्छ। यो एकदम नयाँ उत्पादनहरु को बिक्री को स्तर कम। रातो र बेरंग: तसर्थ, कम्पनी "Cranberry" को उत्पादन गर्न दुई तरिकामा जारी गर्न निर्णय गर्न आए।
यो वोदका (दुवै शास्त्रीय र फल प्रजाति) को समीक्षा ककटेल सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं। उपभोक्ताहरु को distillate परिचित पेय अद्वितीय केहि दिन्छ भन्छन्। त्यसैले यो क्लब केही पेय व्यञ्जनहरु दिन छैन माफ गर्न नसकिने हुनेछ। अझ वोदका को स्कैंडिनेवियाई स्वाद खुलासा गर्न, लामो सुरु "ठण्डा एल।" उच्च ग्लास छर्कनु बरफ चोट र 50 एमएल सुन्तले रङ "फिनल्याण्ड" पोख्नुहोस्। पूरक ग्लास स्याउको रस र अदुवाको जाँड (75 एमएल)। कागती एक स्लाइस निचोड। चिनी सिरप को 10 milliliters थप्नुहोस्। कागती एक स्लाइस र ककटेल चेरी संग ग्लास सजाउनु।
Cranberry वोदका "फिनल्याण्ड" यो ककटेल लागि उपयुक्त छ। समीक्षा रक्सी को 50 एमएल र दारिम रस र बरफ घन को आधा कप एउटा SHAKER मा मिश्रण गर्न सिफारिस गरिएको। तरल ककटेल लागि chilled गिलास मा हालिएको पछि। कागती एक स्लाइस निचोड। सुन्तला बोक्रा र टकसाल पात संग Garnish।
घरमा रक्सी र chokeberry को tincture
वर्णन, संरचना र व्यञ्जनहरु: घर मा मिठो भात रक्सी
BELAZ-7555: प्राविधिक विनिर्देशों र निर्देश पुस्तिका
छुटानाम भएपछि पतिले पत्नीलाई दिने पैसा तिर्न वा कसरी तिनीहरूको आकार घटाउन?
अचम्मको भ्यान बिरालोहरु
ब्याट्री ट्रक: उनि के गर्दै छन् र तिनीहरूले फरक कसरी?
मनोरञ्जन केन्द्रहरू (बालाकोवो): वर्णन, सेवाहरू, मूल्यहरू
विमान प्लाईवुड: प्रयोग को क्षेत्र र सामाग्री विशेषताहरु
कास्केड कपाल कट्टर
किन रूसी मुस्कान छैन? रूसी politeness को सुविधाहरू